लौरा | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
पढ्ने समय:5मिनेट Ciao! तपाईं इटालीमा जीवनभरको गन्तव्य योजना गर्दै हुनुहुन्छ! यो पुनर्जागरण को जन्म ठाउ र प्रतिज्ञा elate र किनभने कला यसको काम तपाईं प्रेरित गर्न एक शहर हो, वास्तुकला, र यसको प्रेम खानाको साथ. इटली साँचो घर हो…
पढ्ने समय:6मिनेट विश्व भर, टिपिंगका धेरै फरक प्रभावहरू र अभ्यासहरू हुन्छन्, उदाहरण को लागी: दक्षिण अफ्रिकामा टिपिंग आवश्यक छ, जस्तो कि संयुक्त राज्य अमेरिका मा छ. तपाइँ बीचको एक टिप छोड्ने आशा गरिन्छ 15 र 25% अमेरिकामा, र यदि तपाईं गर्नुहुन्न भने धेरै गर्न सक्नुहुन्छ…
पढ्ने समय:7मिनेट गर्भवती हुनु तपाईंको जीवनको सबैभन्दा रमाइलो समय हो. यसले गर्छ, यद्यपि, केहि प्रतिबन्धको साथ आउनुहोस्. विशेष गरी यदि तपाईं गर्भवती भएको बेला यात्रा गर्ने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने. बच्चा बोक्ने र बनाउने तपाईंको प्रकारको यातायात सीमित हुन्छ तपाईंको वरिपरि जानको लागि, विशेष गरी जब…
पढ्ने समय:6मिनेट कोभिड-१९. हामी सबै कुरा गर्न सक्षम देखिन्छौं, र राम्रो कारण लागि. यो भाइरस दुनिया gripped छ र पूर्ण हामीले दैनिक जीवन र पाठ्यक्रम ट्रेन यात्रा लाग्छ बाटो परिवर्तन. ट्रेन यात्रा धेरै यातायात को एक मोड हो…
पढ्ने समय:5मिनेट आफ्नो स्वाद तन्तु मनपर्छ एउटा साहसिक मा जानुहोस् र युरोप मा सबै भन्दा राम्रो खाना पर्यटन भाग. तपाईं एउटा उत्सुक foodie हुनुहुन्छ भने, तपाईंको तालु, साथै आफ्नो इन्स्टाग्राम फिड तपाईं अनुभव हुनेछ के संग आनन्द संग हाम फाल्न हुनेछ. अवश्य पनि, सबै भन्दा राम्रो तरिका…